ပညာရေးအလုပ်အကိုင်တွေနှင့်အလုပ်အကိုင်များ | USAHello ကနေအလုပ်အရင်းမြစ်များ | USAHello
ပညာရေးလယ်ပြင်နှင့်ပညာရေးအလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. သငျသညျပညာရေးအတွက်ယူနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးအကြောင်းကို Read. သင်လိုအပ်သောအရာကိုလေ့ကျင့်ရေးထွက်ရှာဘယ်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်.
USA တွင်, ကလေးများအားလုံးကျောင်းသွားရရှိရမည်. ဒါကြောင့်ကျောင်းစနစ်ကြီးမားသည်, နှင့်ဖြည့်စွက်ဖို့အများကြီးပညာရေးအလုပ်အကိုင်ရှိပါတယ်. အများအပြားတက္ကသိုလ်များလည်းရှိပါတယ်, ကောလိပ်များ, နှင့်လေ့ကျင့်ရေးစင်တာများ. ပညာရေး၏လယ်ပြင်တွင်ဤကမ်းလှမ်းမှုအလုပ်အကိုင်အားလုံး.
School တွင်ဆက်ဆံရေးရုံး - ကျောင်းဆက်ဆံရေးရုံးအရာရှိမိဘများစောင့်ရှောက်, ကျောင်းသားများအတွက်, နှင့်ဆရာချိတ်ဆက်နှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်. သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းကကူညီချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ပါလိမ့်မယ်. သင်ကြား ဘယ်လိုကျောင်းဆက်ဆံရေးရုံးဖြစ်.
လက်ထောက်ဆုံးမဩဝါဒပေး - ထို့အပြင်ဆရာရဲ့လက်ထောက်ကိုခေါ်, တစ်သင်ကြားရေးလက်ထောက်စာသင်ခန်းနှင့်ထောက်ခံမှုကျောင်းသားများကိုအတွက်ဆရာ, ဆရာမကူညီပေးသည်. တစ်ဒီဂရီမပါဘဲတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ကောင်းသောအလုပ်. သင်ကြား ဘယ်လိုဩဝါဒပေးတတ်သောလက်ထောက်ဖြစ်.
သင်တစ်ဦးသည်ကျောင်းဆရာဖြစ်လိုလျှင်, start ရန်နေရာကောင်းသင့်ရဲ့ပြည်နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနနှင့်အတူဖြစ်ပါသည်. ပြည်နယ်ဆရာ, ဆရာမအတည်ပြုထားလို့ဖြစ်ပါတယ်, သည်ပြည်နယ်များ '' လိုအပ်ချက်များကိုကွဲပြားခြားနားကြသည်. ပညာရေးသင့်ရဲ့ပြည်နယ်၏ဦးစီးဌာနကိုရှာရန်.
ဘွဲ့ရယူနိုင်သော: သငျသညျနုပျိုကလေးများသင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်, အစောပိုင်းကလေးဘဝပညာရေးအတွက်ဒီဂရီကောင်းလှ၏. သငျသညျအဟောင်းများကိုလေးတွေသင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျသင်ပေးချင်သောအရာကိုဘာသာရပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား – ဥပမာ, သင်္ချာ - နှင့်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဒီဂရီဖွစျလိမျ့မညျ. သင်ကြား တစ်ဦးဆုံးမဩဝါဒပေးဒီဂရီဝင်ငွေကိုဘယ်လို.
ကျောင်းသားတစ်ဦးကိုဆရာဖြစ်လာ: သင်တစ်ဦးဆရာဖြစ်လာမတိုင်မီအများစုမှာပြည်နယ်များကျောင်းသားတစ်ဦးကိုဆရာဖြစ်ရန်သင့်အားလိုအပ်. သငျသညျတစျဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုပညာသင်ကာလအဘို့သင့်အနီးရှိကျောင်းဆုံးမဩဝါဒ ပေး. လေ့ကျင့်ကြလိမ့်မည်.
သင်ကြားစာမေးပွဲဖြေဆိုယူပါ: အများစုမှာပြည်နယ်ဆရာ, ဆရာမများအတွက် Praxis စာမေးပွဲရန်သင့်အားလိုအပ်. PRAXIS အကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
သင့်ရဲ့သင်ကြားမှုလက်မှတ် Get: နိုင်ငံတော်ကဆရာလိုအပ်ချက်ရှာမည်.
သငျသညျရုံးကျွမ်းကျင်မှုရှိပါက, သင်တစ်ဦးဒီဂရီစရာမလိုဘဲတစ်ကျောင်းသို့မဟုတ်ကောလိပ်ရုံးအတွက်ပညာရေးအလုပ်အကိုင်များအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. နောက်ပိုင်းတွင်, သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးကူညီရန်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တချို့လေ့ကျင့်ရေးရနိုင်. ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
ကောငျးစှာအသုံးပွုဖို့သငျ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုထားပါ – အသစ်ရောက်ရှိလာသောမှအင်္ဂလိပ်ဆုံးမဩဝါဒပေးစတင်ရန်. သင်တစ်ဦး ELS လက်မှတ်အလုပ် paid ကိုရှာဖွေရနိုင်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကသင်၏ဒေသခံပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပညာရေးစင်တာမှာလုပ်အားပေးနိုင်ပါတယ်. ESL အွန်လိုင်းသင်တန်းများအကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
တစ်ဦးတိုင်ပင်ဖြစ်လာ - အကြံအစည်ကို၏အသိအမှတ်ပြုဘို့ကောင်စီနှင့်ဆက်စပ်ပညာရေးအစီအစဉ်များ (CACREP) ကျောင်းကတိုင်ပင်မှူးမတ် certifies. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးမအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါနှငျ့သငျအနီးတစ်အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းကိုရှာဖွေ.
Upwardly ကမ္တာ့ အလုပ်-အခွင့်အာဏာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကူညီပေးသည်, ဒုက္ခသည်များ, asylees, နှင့်အထူးလူဝင်မှုဗီဇာကိုင်ဆောင်သူ (SIVs) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်များကို restart လုပ်ပါ.
အသုံး Teach.org ဆရာဖြစ်လာဖို့ခြေလှမ်းတွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်.
သင်တစ်ဦးဒီဂရီရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်, သင်ဆဲတစ်ကျောင်းသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်တက်အလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ. အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ် applications များနှင့်အတူကူညီ. သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင်စင်တာကိုရှာပါ.
Schoolspring.com ပညာရေးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အ website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
အကြောင်းပို Read ပညာရေးအလုပ်အကိုင်တွေ.
ဆုံးမဩဝါဒ ပေး. နှင့်ဒုက္ခသည်ကျောင်းသားများအတွက်ထံမှသင်ယူခြင်း